"Max" kwi-oasis yokuphila kakuhle - kunye ne-sauna / i-whirlpool - I-Airbnb
"Max" kwi-oasis yokuphila kakuhle - kunye ne-sauna / i-whirlpool
Sankt Marein bei Graz-Umgebung, Steiermark, Austria
I-wifi ekhawulezayo ye-86 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
Kwi-oasis eziva ulungile eTrausdorfberg unokuziva ukhululekile kwaye utshaje kwakhona iibhetri zakho kwi-100 leminyaka ubudala kwizakhiwo zefama yethu - kwiinduli eziphakathi kweGraz kunye nommandla wentaba-mlilo!
Indlu "Max" inegumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nesitovu, i-microwave / igrill, isitya sokuhlamba izitya kunye netafile yesidlo sakusasa, igumbi lokuhlala elipholileyo elinendawo yokutyela kunye nebhedi kunye nethafa layo.
Yonwabela i-whirlpool kunye ne-sauna ngokujonga iigusha zethu zehlathi okanye uzimoshe kwi-grill ekhitshini langaphandle!
Isiphumo sesakhiwo esivuselelwe ngothando sikunika uxolo kunye namandla ngaxeshanye - kwaye oko kunye nentuthuzelo yanamhlanje kunye nesimo sengqondo ebomini.
Yonwabela uxolo noxolo kwindawo yakho okanye ufumane inkampani kumbindi wekhitshi langaphandle okanye kwindawo yempilo yangaphandle ene-bio sauna kunye ne-whirlpool.
Kwaye ukuba ufuna ukuthothisa ngokupheleleyo, sicebisa ukuba uhlale phantsi nomhlambi wethu weegusha zehlathi kwaye uzibukele.
43" HDTV ene-I-Netflix, I-Disney+
Kanye phakathi kweGraz kunye neStyrian Volcanic Land, ungonwabela ukujonga iindawo ezinkulu zaseMpuma Styria, ube sedolophini ngemizuzu engama-20 kwaye ukhawuleze ufikelele izinto ezininzi kunye nezihloko zeSoutheast Styria!
Kwidolophu ekufutshane yaseSt. Marein uya kufumana ngaphezulu, yonke into oyifunayo ebomini - kwaye ngeempelaveki ungaphinda uhambe uye eBuschenschank ekufuphi ukufumana iglasi elungileyo yewayini kunye nesnack yaseStyrian!
Ndihlala efama nosapho lwam - kwaye nokuba ndihlala ndingekho emini, kukho umntu osoloko ekhona okanye ndingafumaneka ngomnxeba ngokwam!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sankt Marein bei Graz-Umgebung